Fishery Management Tools | Reef Resilience
Ny fahatakarana ny fiovaovana eo amin'ny sehatry ny trondro, ny fananganana karazana, ary ny toe-piainana ara-tontolo iainana dia tena ilaina kevitra, ny fitantanana mahomby amin'ny fisotroana dia ahitana tetikady fitantanana miaraka amin'ny singa roa:
fitaovana fitantanana mba hifehezana ny habetsahan'ny trondro avy amin'ny ranomasina;
ny fitsipika mifehy ny fijinjana izay mitarika fotoana sy firy ny manitsy ny fitantanana.
Ny fitaovana fitantanana dia azo atao sy ampiasaina amin'ny fitantanana endri-javatra maro amin'ny fisian'ny fisarihana, anisan'izany ny firafitry ny karazana, misambotra-isan-tarika-ezaka ny fanjonoana, ny karazam-pahaizana ara-potoana amin'ny fijinjana, ary ny isan'ny karazam-borona. Ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPirine avaratra ao Palau, fitaovana fitantanana toy ny fetran-tany sy ny faritra mihidy no nampiasaina mba hamerana ny isan'ny zaza tsy ampy taona momba ny jono ary manampy amin'ny fitazonana karazam-bozaka manan-karena amin'ny karazana vatohara manan-karena.
Ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina ao Pohnpei dia mifanakalo hevitra momba ny hoavin'ny faritra voaaro sy ny jono atao amin'ny manodidina an'i Nahtik. Sary © Nick Hall
Ny fehezan-dalàna momba ny fananganana ny harena voajanahary dia azo ampiharina amin'ny fiovan'ny toetrandro tahiry toerana (ohatra: fanatsarana ny habetsahan'ny faritra mihidy mifototra amin'ny haben'ny trondro voajono amin'io faritra io). Amin'ny ankapobeny, ireo fitsipika ireo dia mifototra amin'ny angon-tsarimihetsika manondro ny fanjonoan'ny vokatra. Ny fepetra fanaraha-maso ny fambolena dia natao hanamafisana ny famokarana ary mitazona ny faharetan'ny fisian'ny fisaka.
Ny fitaovana fitantanana tsara sy ny fitsipika mifehy ny fijinjana dia miankina tanteraka amin'ny toe-javatra biolojika, sosialy sy toekarena ary fitantanana ny fisian'ny fisamborana sy ny fiarahamonina. Ny fitantanana ny fanjonoana mahomby dia mitaky tanjona voafaritra tsara, ny fampidirana ireo mpandray anjara rehetra momba ny fisotroana amin'ny fampivoarana ny fitaovana fitantanana sy ny fitsipika mifehy ny fijinjana, ary ny fepetra hanombanana ny fahombiazan'ny farany amin'ny tanjona voalaza.
Fitsipika momba ny safidy Fiovàna fiarovana sy famerenana
(jereo ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanavaozana ny varotra iraisam-pirenena) Ilaina amin'ny fisian'ny mpanjono marobe mba hanamaivanana ny karazam-borona manimba
Mahomby amin'ny fampihenana ny fisamborana
Ilaina ny toerana tsy dia mahomby firy ny fanaraha-maso sy ny fampiharana
Mankasitraka ny politikam-piasana ambony indrindra
Mety ho mora azo Mitombo ny ezaka
Mifantoka bebe kokoa amin'ny fanalavirana ny teboka fahefan-tariby fa tsy manatratra tanjona
Mbola mitarika ho amin'ny fahaverezan'ny fitakiana tolotra ecosystem
Fetra farafahakeliny voafetra
(jereo ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPalau sy / na ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBelize Case Study) Ilaina amin'ny fiarovana ny zazakely na Mega-spawners
Ilaina ny fiarovana ireo karazam-bary mitrandraka efa ela, miaraka amin'ny fananganana vary
Tsy mahomby amin'ny trondro nolavina tamin'ny fiampangana mahantra
Fikirakirana ara-potoana Fotoana fisakafoanana
Fandrarana amin'ny andro
Azo atao isan'andro, na ara-potoana, na fanentanana
Ilaina raha misy toerana tsy misy fotony
Ilaina raha misy fifandanjana ezaka isan-taona
Tsy mahomby raha mahomby amin'ny fampihenana ny ezaka raha tsy miaraka amin'ny fitaovana hafa toy ny fifehezana ny fifehezana na ny famerana fitaovana
Fialam-boly Toeram-piarovana an-dranomasina (MPA)
(jereo ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBelize, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWakatobi, ary / na misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGalapagos Case Studies)
No-Take Zones (NTZs: jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPapouasie-Nouvelle-Guinée, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBelize, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWakatobi sy / na ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBonaire Case Studies)
Zon'ny mpampiasa mpampiasa amin'ny fanjonoana (TURFs: jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampiasana ny zon'ny mpanjono amin'ny fanjonoanamanokatra fisie PDF )
Fomba fisorohana (jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsipika momba ny fampivoarana ireo paikady voajanahary ho an'ny karazan-java-manahirana tsy mahomby) Mety ho rotaka, vanim-potoana, maharitra, na fanonganana
Mahomby indrindra ho an'ny karazana sedanta
Ilaina raha misy toerana tsy fahita firy na toeram-ponenana azo tsaboina amin'ny fanjonoana
Ilaina raha misy ny ezaky ny atidoha
Mety hampitombo ny tombontsoa ho an'ny tsena fizahan-tany ary manome tombontsoa ho an'ny mpanjono avy amin'ny fitrandrahana sy fandraisana mpiasa
Tsy mahomby amin'ny karazam-borona tena izy
Tsy miresaka Mitaky ezaka
Manana fandaniana avo lenta izay mety hahatonga ny fifandonana sy ny famindrana ny mpanjono
Fepetra azo atao Fandraiketana voafetra (Lisansy)
Isan'ny orinasa orina
Net Set Time
Afaka isan'andro, isan-taona, na isan-taona
Fifehezana tsotra ho an'ny famerana ny sambo na mpanjono marobe amin'ny fisamborana
Sarotra raha misy fiaramanidina maro
Tsy mety amin'ny mpanjono izay miankina amin'ny fanjonoana
Mety ho sahirana amin'ny fisian'ny mpanjono marobe raha toa ka misy karazan-karazan-karazan-javamaniry mahazatra izany
Feno fetra Fihazonana tanteraka
Quotas Systems sy Catch Shares (jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMitadiava boky fianarana famolavolanamanokatra fisie PDF )
Afaka isan'andro, isan-taona, na isan-taona Sarotra raha misy fiaramanidina maro
Mety tsy ho mora ny mifehy ao anatin'ny toe-javatra maro
Mitantana ny fandrosoana amin'ny fahasalaman'ny olona sy ny tontolo iainana
Matetika ireo manampahaizana momba ny haran-dranomasina no miatrika ny fifanakalozan-drivotra mampifanaraka ny tombotsoan'ny sehatry ny jono sy ny fiarovana ny zavaboary. Ao amin'ny ohatra tsara indrindra hatramin'izao, dia mahazo tombony amin'ny ankapobeny avy amin'ny fomba fiasa ara-tontolo iainana amin'ny fitantanana ny jono ny fiarahan'ny mpanjono. Ao amin'ny fitantanana ny fanjonoana ara-tontolo iainana (EBFM), tanjona maromaro no mitantana ny tontolo voajanahary manontolo amin'ny haran-dranomasina, hiantohana ny fahasalamana maharitra amin'ny haran-dranomasina sy ny isan'ny trondro ary hihazona tolotra hafa ara-tontolo iainana izay omen'ny vatohara, toy ny fizahantany, fiarovana, ary ireo soatoavina ara-kolotsaina hafa. Amin'ny teny hafa, ny EBFM dia miantoka fa ankoatra ny fisian'ny mpanjono, dia mbola mandray soa avy amin'ny tombontsoa maro ananan'ny harambato ny fiarahamonina.
Ankoatra izany, ireo fomba fiasa mifototra amin'ny zo izay manome antoka ny fisian'ny mpanjono, ny fampiasana ary ny fanaraha-maso ny toerana fanjonoana na ny tahirin-trondro dia miaro ny fivelomana sy ny fidirana amin'ny sakafo ho an'ireo vondronolona mpanjono.
Fitantanam-pitondrana mifototra amin'ny tontolo iainana
Ny rafi-pitantanana ara-tontolo iainana mifototra amin'ny ecosystem (EBFM) dia manolo-tsaina ny fomba fitantanana ny harena voajanahary izay manamarina ny fikojakojana ny asa sy ny serivisy momba ny tontolo iainana ho tanjona voalohany amin'ny fitantanana ny jono. Izy io koa dia manana fifantohana matanjaka amin'ny fampidirana ny tsy fahazoana antoka, ny fanovaovana, ary ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fitantanana ny jono. Ny fomba fiasa ara-tontolo iainana dia mampitombo be ny fanamafisana ny tanjona amin'ny fitantanana eo amin'ny fisorohana fisaka sy ny fiarovana ny vatohara, mety ahafahana miara-miasa miaraka amin'ny fifantohana iombonana amin'ny fanamafisana ny haran-dranomasina. Ny mpikarakara dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tanjona manaraka ho amin'ny fitantanana ny jono.
Mitazona vokatra maharitra - Voafetra ny tahirin-tsakafo ary ny vokatra ara-biolojika dia mitaky ny fandaniana azo avy amin'ny fisian'ny fisaka. Ao amin'ny haran-dranomasina mahasalama voajanahary, ny biomass trondro dia heverina ho 1,200-1,300 kg / ha. The Tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fahaterahana maharitra (BMMSY) dia eo anelanelan'ny 25-50% momba ny biomass tsy fantatra, na ≈300-750 kg / ha. ref
Miaro ireo singa miasa - Ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny fotodrafitrasa fototra, toy ny mpamono biby ary ny biby herbivores, dia efa fantatra. Na manosika ny fiheverana ara-toekarena (toy ny fiarovana ireo onjam-peo mba hanohanana ny fizahan-tany mamomamo) na ny olana ara-tontolo iainana (fandraràna ny fisamborana ireo trondro voajanahary mba hampihenana ny loza ateraky ny algôn-pototra amin'ny vatohara), ny fiarovana ny fotodrafitrasa fototra dia tetikady lehibe ho fanohanana haran-dranomasina. Ny fiarovana ireo fikambanana dia manome sehatra iray amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitantana ny haran-dranomasina sy ny mpitantana ny jono.
Mitandrema amin'ny fisintonana - Ny fitrangongozana amin'ny karazam-bolo tsy misy lanjany na biby tsy misy dikany mandritra ny asa fanjonoana dia mety hisy fiantraikany goavana eo amin'ny karazan-javamaniry momba ny haran-dranomasina. Ny sokatra amoron-dranomasina, ny antsantsa, ny vori-dranomasina, ny trondro tanora, ary ny karazany toy ny sponges sy ny mpankafy an-dranomasina dia mety hampiavaka ny fisian'ny fisaka.
Arovy ny fako - Fiarovana fanangonam-bozaka dia manan-danja amin'ny fitantanana ny jono sy ny fiarovana ny zavaboary. Ny fihazonana fikarakarana ara-pahasalamana ara-pahasalamana (loharanom-bary) an'ny trondro eny amin'ny haran-dranomasina dia tena zava-dehibe amin'ny faharetana sy ny fahasalaman'ny rafitra haran-dranomasina. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSiansa sy fiarovana ny fanangonam-bozaka dia manana loharano hanohanana ny ezaka hiarovana ny fitrandrahana trondro.
Arovy toerana manan-tantara - Ny karazana vatohara dia miankina amin'ny haran-dranomasina sy ny toeram-ponenana mifandraika (ohatra: honko, ahitra) ho an'ny sakafo, fialofana ary fanorenana. Ankoatra ny fanangonam-bozaka, ny faritra hafa manan-danja hiarovana dia ahitana ny: sehatry ny fizahan-tany, ny làlan-kaleha, ary ny toerana azo antoka / marefo.
Mitantarà loza amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fanamafisana ny ranomasina- Fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro (ie ny fampiroboroboana ny ranomasina, ny fiakaran'ny ranomasina, ny fiovan'ny fikorontanan'ny toetr'andro, ary ny fiovan'ny ranomasimbe) ranomaso dia misy fiantraikany amin'ny tontolo voajanahary amin'ny vatohara. Ny fitantanana ny fitantanana eo amin'ny sehatra eo an-toerana mandritra ny zava-mitranga mafy orina dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fanalefahana ny fahasimban'ny fahasimbana sy ny fanarenana.
Ny fitantanam-bokatra momba ny fitantanana ny zon'olombelona
Ny fitantanana ny fisotroan-dronona mifototra amin'ny zo (RBFM) dia mamorona ny fepetra ahafahana manatsara ny fahasalaman'ny isan'ny trondro, satria ny mpanarato dia mikendry ny ho mpitantana ny tontolo iainana maharitra. Ireo rafitra mifototra amin'ny zo dia afaka manatsara ny fahasalaman'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny mpanjono amin'ny famerenana an-tsitrapo ny toeram-ponenana any an-toeram-ponenana, fananganana toeram-piarovana an-dranomasina tsy miankina, ref Ohatra avy amin'ny RBFM dia ahafahana mampiasa fampiasa an-tanety amin'ny fanjonoana (izay ahazoan'ny mpanjono manokana na ny vondron'ny mpanarato ny zon'ny mpanjono) sy ireo kooperativa manjono (izay ahitana vondron'ny mpanjono miara-miasa amin'ny fitantanana ny lafiny fisian'ny fisamboaravoarana).
Ankoatra ny tombontsoa ekolojika, ny RBFM dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny toeram-piompiana fisaka. Miaraka amin'ny zo hizara fisarihana, ny famporisihana dia hampitombo ny tombontsoa ara-toekarena amin'ny fampihenana ny vola miditra amin'ny mpanjono sy / na amin'ny fampitomboana ny lanjan'ny trondro. Na izany aza, ny rafi-piarahamonina mifototra amin'ny zon'olombelona dia mety miteraka fifanoherana rehefa ny fizarana ny zon'ny sembana dia mitarika amin'ny famerenana ny harena izay manana mpandresy sy mpandresy mazava.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaratoana ho an'ny vahaolana: Tari-dalana momba ny fitantanana ny jono ho an'ny mpitantana tsy fisakafoanana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBoky torolàlana ho an'ny mpitantana ny jonomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIvotoerana vahaolana momba ny jono - Boky Torolàlana & Tari-dàlana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ny harena an-dranomasina eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ao amin'ny Nosy Salomon: Torolàlana ho an'ny mpandrindra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEAFnet